मोरङ कांग्रेसले संगठन सुदृढीकरण अभियान सञ्चालन गर्ने – KhabarPurwanchal
मोरङ कांग्रेसले संगठन सुदृढीकरण अभियान सञ्चालन गर्ने
खबर पूर्वाञ्चल, २३ जेष्ठ २०७५, बुधबार १९:५२
विराटनगर / ६ मध्ये ५ वटा निर्वाचन क्षेत्र गुमाएको नेपाली कांग्रेस मोरङले संगठन सुदृढीकरण अभियानलाई गाउँस्तरसम्म पु¥याउने भएको छ ।
विराटनगरमा आयोजित दुई दिने प्रशिक्षक प्रशिक्षणमा सहभागीले पनि संगठन सुदृढीकरणसँगै शुद्धीकरणमा पनि लाग्नुपर्नेमा जोड दिए । “प्रशिक्षणले उच्च मनोबलका साथ संगठन सुदृढीकरणमा लाग्न अभिप्रेरित गरेको छ,” मोरङ कांग्रेसका सचिव मोदराज घिमिरेले भने, “कांग्रेस अब नयाँ जोश र जाँगरका साथ गाउँ पस्छ ।” अर्को निर्वाचनमा मोरङका ६ वटै निर्वाचन क्षेत्र कांग्रेसले जित्ने गरी संगठन विस्तारमा लाग्ने सचिव घिमिरेले बताए । अबको पूरै चार वर्ष कांग्रेस गाउँमै हुने उनको भनाइ छ ।
निर्वाचनमा पराजय भोग्नुको पछाडि आन्तरिक कारण नै भएको निचोड निकालिएको छ । मोरङमा डा. शेखर कोइराला, महेश आचार्य, अमृत अर्याल, डिकबहादुर लिम्बू र सुनिल शर्मा पराजित हुनुको पछाडि आन्तरिक नै भएको निष्कर्ष कांग्रेसले यसअघि नै निष्कर्ष निकालिसकेको छ । “अब विगतका सबै तिता घटनालाई बिर्सिएर नयाँ सोचका साथ कांग्रेसले संगठन विस्तारको अभियान सञ्चालन गर्छ,” मोरङ सभापति डिकबहादुर लिम्बूले भने, “सबै स्थानीय तहका वडा–वडामा अब कांग्रेस पुग्छ ।” आफ्नै कारणले केन्द्र र प्रदेश सरकारको नेतृत्व गर्ने अवसर गुमाएको उनको भनाइ छ ।
मंगलबारदेखि सुरु भएको प्रशिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रममा भातृ र शुभेच्छुक संगठनका ८० जनाभन्दा बढीको सहभागिता थियो । उनीहरूलाई केन्द्रीय सदस्य डा. मीनेन्द्र रिजाल, चन्द्र भण्डारी, डा. डिला संग्रौला, गुरुराज घिमिरे, आमन्त्रित केन्द्रीय सदस्य हसन अन्सारीलगायतले प्रशिक्षण दिएका थिए । उनीहरूले समसामयिक राजनीति, बजेट, कांग्रेसको अबको दायित्वलगायतका विषयमा प्रकाश पारे ।